I-B / W kunye ne-hyperrealism kwimizobo ye-Alessandro Paglia | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Imifanekiso emnyama nemhlophe ihlala inamandla amakhulu. Ukuba sifuna umculi ohlekisayo othulule bonke ubugcisa bakhe kunye nokubonakalisa umzobo kwi-B / W, sinokufumana uFrank Miller. Omnye wabazobi beekhathuni kule minyaka ingamashumi idlulileyo kwaye ngubani owaziyo indlela yokubonisa ngathi akukho mntu amandla amakhulu kumyalezo ukuba ingashicilela umnyama nomhlophe kwimisebenzi enjalo yokuhlafuna kunye neyasesitalatweni njengeSin City.
Ndikwazisa ukuba ndingumthandi wokusetyenziswa kwamnyama nomhlophe kwimisebenzi yam, njengoko kunjalo ku-Alessandro Paglia othi, ngenxa yeepeni ze-gel, akwazi ukwenza imisebenzi yobugcisa ekumgangatho ophezulu kunye nezobugcisa. Imizekeliso ejongana ne-hyperrealism ukusibonisa amandla okubonisa izinto ezithile ngokufezekiswa kobuchwephesha kumgangatho omkhulu ngazo zonke iindlela.
Omnye umthandi wobunzulu kunye nokuphakama komnyama nomhlophe oko Sebenzisa usiba lweinki yejel ukubamba umahluko phakathi komhlophe wephepha ngokwalo kunye nomnyama omnyama onikezelwa lolu hlobo lwesixhobo sokuzoba kunye nomzekeliso. Imizekeliso ethatha amandla amakhulu ngale ndlela ichazayo.
Ngeendiza Zoba imifanekiso kunye namahlaya amnyama namhlophe okoko wayengumntwana, ke ngoku ufumene umtsalane kunye nefuthe lefomathi enkulu ngobuchule boqobo.
Ingcamango yakhe yayingu utshintshe izifundo zolu ngcelele kwizicucu zobugcisa kwaye nganye yezo mizobo kukuphakamisa ezinye zeempawu zobuntu bakhe. Inkqubo yokuyila ilula, njengoko ukhetha isifundo, usifota, usizobe ngemizobo yepensile, kwaye uyivelise ngocoselelo ngeepeni ze-inki kwiphepha elibukhali. Iqokelela imaleko eyahlukeneyo ye-inki kwipateni ephindayo kwizangqa ezincinci. Isiphumo ngumsebenzi ochazwe kakuhle.
Unga fumana umsebenzi wakho ukusuka Instagram.
Okungakumbi malunga nomnyama nomhlophe, ukusuka apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ihyper-enokwenyani yemizobo ye-inki ye-ink kunye neeyure ezingama-250 zomsebenzi kuzo